Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 46
Inona ny loko, ny metaly ary ny vato azo ampifandraisina amin'ny planeta fito?
Misy ny loko fito amin'ny sisin'ny masoandro, mena, voasary, mavo, maitso, manga, indigo, violet. Ity ny fizarahan'ny tara-masoandro amin'ny alàlan'ny fahagagana ary toy ny hita taratra amin'ny velarana. Ireo loko fito ireo dia mety ho hita taratra any afovoany ary ho tara-pahazavana indray Ny loko dia lazaina fa mifanandrify amin'ny planeta fito, mars, masoandro, mercury, saturn, jupiter, venus, volana. Toy izany koa ny metaly fito, vy, volamena, rakitra, firaka, timah, varahina, volafotsy. Ny loko, metaly ary planeta dia voalaza fa mifandraika sy mifandraika amin'ny tsirairay. Ny vato, garnet, ametistika, vato mihosin-drà, diamondra, emeraoda, agate, ruby, sardonyx, safira, opal, topaz, turquoise, dia tokony ho mifandray amin'ny roa ambin'ny folo volana; ny tsirairay dia voalaza fa manana fiantraikany sasany rehefa mitafy amin'ny andro sasany, indrindra indrindra mandritra ny volana izay hananany. Ireo mpanoratra momba ny taranja goavambe dia nanome fanasokajiana sy fifanarahana samihafa amin'ny loko, metaly ary planeta. Na inona na inona fanasokajiana, ny motif dia mamaritra ny fitsipika sy ny fomba tokony harahina mba hahazoana tombontsoa amin'ny fanaovana, misaraka na mitambatra, loko, metaly ary vato.
Tokony ho faritana ve ny fitafy ny loko, ny metaly ary ny vato amin'ny alàlan'ny halehan'io planeta io araka ny nahaterahan'ilay nitafy azy?
Raha misy mino ny fahombiazan'ny finoana; raha manam-pinoana izy; raha tsy te handratra amin'ny hafa izy amin'ny fanaovana loko, metaly sy vato — Ie. Raha heveriny ho fanao mampihomehy izany, dia mbola miezaka ahita ny fomba fiasa azy; raha mino ny halehiben'ny loko, metaly ary vato izy ary mitafy azy amin'ny zavatra iray mba hampisy hery ratsy na ratsy amin'ny olona rehetra.
Ataovy ve ny karazana loko, metaly ary vato misy viriosy manokana, ary ahoana no ahafahan'izy ireo manambady tsy misy resaka momba ny planeta?
Ny loko, metaly ary vato dia manana sanda manokana, tsara na ratsy. Saingy ny tanjaky ny loko tsirairay, metaly sy vato dia voafaritra amin'ny alàlan'ny fiandohan'ny fiaviany, ny fomba fanomanana azy, na amin'ny alàlan'ny hery mitaona azy. Ny olona te haneso ny fiheverana fa ny loko dia misy soatoavina sasany ary izy ireo dia ahazoana fiantraikany sasany, dia hanana antony hanovana ny fomba fijeriny raha mitafy akanjo mena eo alohan'ny omby.
Ny lehilahy manandrana magneto dia tsy hoheverina ho hatsikana na finoanoam-poana fotsiny ny fanambarana fa ny metaly sasany dia manana fananana vetaveta. Tsy misy misalasala fa misy mahavariana mahafinaritra izay ananan'ireo vato ho an'ny olona tsirairay amin'ny vanim-potoana rehetra. Ankoatry ny tanjona ara-toekarena na haingon-trano dia misy fiantraikany manokana amin'ny fihetseham-pon'ny olona. Matetika dia tsikaritra fa rehefa miditra amin'ny fanjakana ara-tsaina na ara-pihetseham-po sasany ny olona sasany dia mahita loko sasany izay mahazatra amin'ny toetr'izy ireo. Ohatra: ireo mpanao heloka bevava izay niaiky heloka dia nilaza fa nahita mena izy ireo talohan'ny nanaovan'izy ireo ny famonoana azy ireo. Amin'ny lafiny iray kosa, ireo izay omena fotoana hisaintsaina, dia milaza fa mahita loko mavo na volamena rehefa mandalo fiononana milamina na finiavana.
Ny metaly dia misy dikany sy lanja amin'ny asan'ny maizina, ary koa ho an'ny fampiasana mahazatra izay ametrahana azy, ary toy izany koa ny vato. Tsy maintsy ianarana sy ianarana anefa ireo soatoavina ireo. Ny saina dia tokony ho mailo amin'izy ireo alohan'ny hampiasana ny soatoaviny amin'ny fomba azo ampiharina sy tsy misy loza amin'ny vatana sy ny saina. Ny fianarana sy ny fiofanana dia ilaina amin'ny fahazoana fahalalana momba ny soatoavin'ny maizina sy ny fampiasana metaly raha ny momba ny siansa momba ny metallurgy. Izay maminavina na manana hevitra momba ny loko, ny metaly ary ny vato, izay tsy nisokatra ny sainy anatiny, izay tsy nampiofana ny sainy sy nanafay ny sainy, dia mety hanao fihetsika amin'ny finoana jamba ka hahazo vokatra, fa hampientanentana sy hanaiky. maneso - ary mbola ho jamba ihany izy.
Afaka mitafy loko, metaly na vato ny olona iray raha tsy misy fiheverana ireo planeta rehefa manana izany hery izay nateraky ny fahalalana izany izy, ary ambony noho ny fitaomana loko, metaly na vato. Ny finoana hentitra sy tsy voahozongozona izay tsy misy hery mahery setra manimba azy, dia fanoitra ho an'ny fitaomana avy amin'ny zavatra hita maso. Io finoana sy hery io dia avy amin'ny antony manosika, fisainana tsara, toe-tsaina tsara. Rehefa manana izany ny olona, ​​ny loko, ny metaly ary ny vato, miaraka amin'ny fitaoman'ireo planeta azy dia tsy misy fiantraikany mihoa-pampana aminy. Saingy, angamba, tsy tokony hitafy izany izy ireo.
Inona ny litera na isa napetraka na voasoritra amin'ny planeta?
Ireo taratasy, isa, anarana, tombo-kase, sigra, dia natambatra isan-karazany amin'ny planeta nataon'ny mpanoratra momba ny astrolojia, alikazy ary ny majika, ary kaonty sy fampiharana samihafa hita ao amin'ireo boky miresaka momba ireo lohahevitra ireo. Tsy misy fitakiana atao eto amin'ny fahalalana toy izany, na ny zo hanomezana izany. Tsy misy fahalalana momba ny goavambe momba ny taratasy sy ny anaran'ireo "planeta" izay azo ampitaina mivantana amin'ny alàlan'ny boky na boky voasoratra. Mety hanome fampahalalana be dia be ny boky, nefa tsy afaka mampita fahalalana. Ny fahalalana dia tsy maintsy ahazoana ezaka ataon'ny tsirairay. Ny fahalalana dia azo amin'ny alàlan'ny fampiharana ny valin'ny traikefa amin'ny fampiasana tsara indrindra. Ny fahalalana ny litera, isa sy ny anarana dia ho avy amin'ny fandalinana sy famakafakana ary famolavolana momba ny ampahany sy ny endrik'ireo taratasy sy ny fampiarahana azy. Ho an'ny olona izay manana ny sainy manondro ny asan'ny litera, isa, anarana, tsara ny mieritreritra sy manondro momba azy ireo, fa tsy manandrana mampihatra ireo teôlôjia mandra-pahatongan'ny teolojia ho toerana azo antoka. Tsy azo antoka ny fahazoana antoka amin'ny alàlan'ny fanazarana ny momba sy ny fampiharana amin'ny taratasy, isa, anarana, loko, metaly na vato. Ny fahatokian-tena momba izany dia tsy misy afa-tsy ny fahaizana sy ny fifehezana ireo singa na hery manetsika azy ireo, ary asehon'ny faniriana, ny faniriana ary ny fihetseham-po ao anatiny. Betsaka ny alchemist sy mpanao ody no lasa nalahelo satria nanandrana ny hanatanteraka an'izao tontolo izao tsy misy, inona no tokony hatao eto an-tany.
Ny loko hita maso dia taratry ny fanjakana sy ny fihetsem-po. Ny metaly dia ny fidobohana na fanamafisana ireo singa tsy hita izay misy ifandraisany amin'ny fanahin'ny singa tsirairay ary amin'ny alàlan'ny fiasan'izy ireo. Io ihany no azo lazaina fa vato. Ny metaly sy ny vato dia misy magnetika na elektrika. Aiza no mandeha, ny singa na hery mifandraika aminy dia mety ho voatazona sy ho lasa fiasana, satria ny hery magnetika mandeha amin'ny vy, na raha ny herin'aratra dia tarihin'ny tariby varahina. Ny fitafy loko, metaly na vato dia mety hamoha ka mamporisika azy ao anatiny, izay mifanentana amin'ny singa na hery tsy misy, ary mety manosika ireo singa na hery hanetsika ireo amin'ny alàlan'ny fahatsapan-tena ao anatin'izy ireo. Amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny anatiny tsy misy azo fehezina.